Ndezvipi zvinhu zvinokodzera simbi laser yekucheka muchina
Ndezvipi Zvishandiso Zvinokodzera Simbi Laser Kutema Muchina Kuzvarwa kwesimbi laser yekucheka muchina kunonyanya kugadzirisa kushanda kushanda uye kucheka kurongeka. Asi kugona kwepamusoro uye kunyatsoita kure kure nezvakataurwa nevanhu o ...
Ndezvipi zvinhu kukanganisa Laser achiita zvokutemera?
Ndezvipi The Zvinhu Kuti Kanganisa Laser achiita zvokutemera? Lasers inogona kuita mhando zhinji dzekugadzira. Senge pamusoro pekupisa kurapwa kwezvinhu, kutenderera, kucheka, kubaya, kuveza uye micromachining. Cnc Laser achiita zvokutemera muchina proc ...
America Vatengi Got Kutanga Kurongeka
America Vatengi Vakawana Chekutanga Order Musi waApril 26, takagamuchira fomu yekubvunza zvakananga kubva kuAmerican mutengi Mr. Fip. Zvinodiwa nevatengi: Unogona here kundipa chitauro chemuchina mumwe, kuendesa kumba, California / USA. Zvakare ple ...
Various Kucheka Nzira Of Laser Kucheka Machine
Yakasiyana-siyana Kucheka Nzira dzeLaser Kucheka Muchina Laser yekucheka inzira isiri yekudyidzana yekugadzirisa ine simba rakakura uye kugona kuwanda kwekudzora. The Laser gwapa dzakakwirira simba arambe achirema anoumbwa pashure achitarisa Laser bea ...
On The View Of Laser Kucheka Machine Industry
On The View Of Laser Kucheka Machine Industry Mumakore achangopfuura, kuti Laser nokuveza muchina indasitiri kwakasimbiswa nokukurumidza. Kubva pane yekutanga YAG michina uye CO2 zvishandiso kune yazvino optical fiber, kubva kudiki diki simba opareta fi ...
Akawanda Makomborero E Laser Chichatara Machine
Akawanda Makomborero E Laser Chichatara Mashini Iyo laser yekumaka muchina ine yakanyanya kunyatsoita, iyo laser kumhanya kwechiedza kwakanaka kwazvo, ichiita pamusoro pechinhu, iko kunyatso kwehuremu hushoma hwekumisikidza kunogona kusvika 0.01mm ....